Dhageysiga Codsiga Obama ee Awood Loo Adeegsado ISIS
Xubnaha sarsare ee Kooxda Amaanka Qaranka ee Madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa inay ka hor hadlaan dhageysi uu Aqalka Senateka sameyn doono maanta oo arbaca ah, dhageysigaas oo ku saabsan codsi Madaxweyne Obama uu ku doonayo in awood loo adeegsado dagaalka ka dhan ah ISIS.
Mr. Obama ayaa hindise ahaan ku soo jeediyay bishii la soo dhaafay in ogolaansho la siiyo, taasoo uu ku doonayo awood xadidan oo ay ku jiraan adeegsiga ciidamada lugta ee mareykanka , si buu yiri loo baabi’iyo dagalyahanadda kooxda Daacish.
Guddiga Xiriirka Arimaha Dibadda ee Aqalka Senateka ayaa dhageysan doona, Xoghayaha Difaaca Ashton Carter, Xghayaha Arimaha dibadda John Kerry iyo Guddoomiyaha taliyeyaasha ciidamada General Martin Dempsey.
Kulanka ayaa qeyb ka ah hanaan dheer oo ogolaansho buuxda Qorshahan loogu raadinayo labada aqal ee Senateka iyo kan wakiilada.
Qorshahan uu madaxweynaha soo jeediyay ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay xubnaha congresska ee xisbiga Jamhuuriga , kuwaasoo ku diidan adeegsiga ciidamo lugta ah.
Waxaa kaloo jira xubno dimuquraadiyiin ah oo Iyana ka soo horjeeda adeegsiga ciidamada Lugta ee Mareykanka.